बीए पढ्ने यी युवती छानामाथि चढेर लिन्छिन् अनलाइन कक्षा! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/बीए पढ्ने यी युवती छानामाथि चढेर लिन्छिन् अनलाइन कक्षा!
काठमाडौं, को’रोना भा’इ’रस ‘कोभिड १९’ को प्रकोपसँगै गत जनवरी महिनादेखि विश्वभर सं’कटको अवस्था निम्तिएको छ। को’रोनाका कारण लाखौं सं’क्रमित छन् भने लाखौंले ज्यान गुमाएका छन्। विभिन्न देशमा लकडाउन लागू गरिएको छ भने डब्लूएचओले शारीरिक दुरीको नियम पालना गर्न भनेको छ। यस्तो अवस्थामा विश्वभरका विद्यालय संचालनमा ठूलो धक्का लागेको छ। तर विद्यालयहरुले भिडियो एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर अनलाइन कक्षा भने सं’चालन गर्न थालेका छन्।
तर अनलाइन कक्षा सबैको पहुँचमा भने पुग्न सकेको छैन। यतिबेला विश्वभर डिजिटल डिभाइडको मुद्दा उठ्न थालेको छ। अनलाइन कक्षा हुनेखाने बर्गको लागि मात्र उचित देखिएको र सामान्य परिवारले यो महँगो भएका कारण प्रयोग गर्न नसकेको बताउन थालिएको छ। यसबीचमा भारतकी नमिथा नारायनन् जो बीए इंग्लीस पाँचौ सेमेस्टरकी विद्यार्थी हुन् उनले पनि अनलाइन कक्षा लिइरहेकी छिन्।
तर घरमै अनलाइन कक्षा लिन उनलाई निकै गाह्रो देखिएको छ। उनको एक तस्बिर सार्वजनिक भएको छ।जहाँ उनी घरको छानामाथि चढेर मोबाइल नेटवर्क आउने ठाउँमा बसेर अनलाइन कक्षा लिइरहेकी छिन्। केरलास्थित अरिकालमा घर भएकी उनी भन्छिन्,‘मैले बिभिन्न टेलिकमको सिम कार्ड प्रयोग गरेर राम्रो नेटवर्क पाउन प्रयास गरेको छु। अनलाइन कक्षा लिन निकै गाह्रो भ’इरहेको छ।’ द हिन्दु
आज बुधबार पत्याउनै नसकिने गरि यस्तो भयो सुनको मुल्य !